Fanamboarana prototype - Mestech Industrial Limited
Fanamboarana prototype dia ny fanaovana santionany iray na maromaro arakaraka ny famolavolana ny vokatra na ny fananahana, amin'ny alàlan'ny fomba fanodinana manokana, arakaraka ny fitakiana ny endrika sy ny firafitry ny vokatra tsy misy lasitra famokarana.
Ny prototype dia saika mitovy amin'ny tena vokatra amin'ny endrika, loko ary endrika. Izy io dia ampiasaina hanamarinana raha toa ka marina sy mitombina ny endri-javatra mitambatra habe, ny fisehoany, ny lokony ary ny fiasa sasany amin'ireo vokatra vao noforonina, na mba hampisehoana vokatra amin'ny mpanjifa hahazoana ny hevitry ny mpanjifa na ny fanekena ny tsena.
Ny tsingerin'ny fiainana dia manomboka amin'ny famolavolana ary mifarana amin'ny tsena. Ny famolavolana vokatra dia mamaritra ny fiasa, ny fisehoana ary ny fahamendrehan'ny vokatra. Fantaro ny fizotrany sy ny vidin'ny vokatra. Ny famolavolana vokatra dia asa henjana, izay misy ifandraisany amin'ny fahombiazan'ny vokatra iray manontolo. Manomboka amin'ny famolavolana vokatra ka hatramin'ny famokarana betsaka farany, ny karazana vokatra rehetra natao ho an'ny famokarana betsaka dia mila mampiasa vola, fotoana sy hery be. Ny famolavolana tsara no lakilen'ny fahombiazan'ny vokatra. Ny famokarana prototype ny vokatra hamakafaka, hanamarina ary hanatsarana ny famolavolana vokatra dia fomba iray lehibe hahazoana famolavolana vokatra tonga lafatra. Ny fanamboarana birao tanana dia afaka manatsara ny hafainganan'ny fampandrosoana ny vokatra
Vokatra indostrialy ankapobeny, toy ny elektronika, fitaovana elektrika, fiara sy fitaovana fitsaboana, vita amin'ny plastika, fitaovana na fitaovana elektronika. Mba hialana amin'ny fako matotra amin'ny bobongolo famokarana betsaka sy ny famokarana ateraky ny lesoka tamin'ny famolavolana dia manao santionany modely amin'ny vidiny kely izahay amin'ny alàlan'ny famolavolana masinina, famolavolana laser ary bobongolo vonjimaika ary fomba hafa hanaovana fandinihana, fivoriambe ary fanombanana, na aseho azy ireo amin'ny mpanjifa.
1. Famokarana metaly amin'ny tanana modely: misy fomba telo lehibe hanaovana maodely ampahany vy
(1). Vy metaly: miondrika, manapaka, extruding ary mikapoka amin'ny tanana na fitaovana tsotra. Ity fomba ity dia ampiasaina indrindra amin'ny maodely fanaovana faritra vy vita amin'ny rindrina matevina. Ireo fitaovana azo ampiharina dia misy vy, firaka aliminioma, firaka varahina ary firaka zinc.
(2) milina cnc: mihodina, manodina, mitoto, manafaka ary manovo ny vy amin'ny fitaovana milina. Ity fomba ity dia ampiasaina amin'ny fananganana maodelin'ny faritra misy tsanganana sy zoro, indraindray ny lavaka na ny famaranana eo an-toerana ny maodely vita amin'ny metaly dia mila milina ihany koa. Ireo fitaovana azo ampiharina dia misy vy, firaka aliminioma, firaka varahina ary firaka zinc.
(3). Fanontana 3D laser amin'ny laser (sinter): Ny fanontana 3D vita amin'ny metaly dia ampiasaina hamokarana faritra misy endrika sy rafitra sarotra izay sarotra ateraky ny famolavolana sy ny fanodinana vy, toy ny lelan'ny motera, ny fantson-drano fantsom-panafody sns. vy sy martensitika vy, vy tsy misy fangarony, titanina ary firaka titanium, firaka aliminioma, firaka vita amin'ny nickel, firaka kobalt chromium ary firaka fototra varahina
2. Prototypes plastika: misy fomba telo lehibe anaovana prototypes plastika:
(1) .CNC machining: izany hoe ny milina plastika dia milina amin'ny fitaovan'ny milina. Ity fomba ity dia ampiasaina amin'ny fametahana akorandriaka, fanakanana ary vatana mihodina. Azo ampiharina amin'ny akora plastika saika rehetra.
(2). Fanontana sy fanodinana laser 3D (SLA sy SLS): SLA dia ampiasaina hanamboarana ny prototype amin'ny faritra sarotra misy endrika sy firafitra sarotra amin'ny CNC, amin'ny ankapobeny mampiasa fitaovana ABS sy PVC antsoina hoe resin photosensitive. Ny SLS laser forming dia mety ihany koa amin'ny plastika malefaka TPU izay tsy zakain'ny CNC, ary ny plastika injeniera toa nylon.
(3) .Ny fametahana haingana ny silika gel bobongolo (ao anatin'izany ny famenoana ny banga sy ny molony): ity dingana ity dia maka ny maodely narotsaky ny CNC na navoakan'ny laser 3D ho fotony, mandatsaka lasitra gel silika maromaro, ary avy eo dia mampiditra ny plastika misy ranoka ao anaty lavaka famolavolana silika. Aorian'ny fanasitranana dia tapaho ny lasitra gel vita amin'ny silica mba hahazoana ny faritra plastika. Ireo fitaovana ampiasaina hanamboarana ireo faritra dia ABS, PU, ​​PC, nylon, POM ary PVC malefaka
3. Fanamboarana prototype an'ny silica gel:
Silica gel fitaovana dia malefaka ary ny maripana haavon'ny dia ambany sy malefaka, ka ny fanontana CNC na laser 3D dia matetika tsy misy. Ny fomba lehibe hanaovana prototype silikona dia ny bobongolo ary ny famolavolana bobongolo tsotra.
Ireto ny prototypes nataontsika ho an'ny mpanjifantsika:
Prototypes an'ny Metal Metal
Prototypes metaly takelaka
3D prototypes manova
Prototypes silikola amin'ny bobongolo banga
Prototypes plastika CNC
Prototypes fanontana laser 3D
Prototypes plastika amin'ny famenoana ny banga
Prototypes silikola amin'ny famolavolana bobongolo tsotra
Fitsaboana ambonin'ilay prototype
Anisan'izany ny fanontam-pirinty 3D, ny fanodinana CNC, ny plating amboniny, ny hosodoko ary ny fanonta lamba vita amin'ny landy an'ny maodely ampahany amin'ny plastika.
Anisan'izany ny faritra vy, firaka aliminioma, firaka zinc, famokarana prototype sy sary hosodoko vita amin'ny vy, fandehanana elektrôlika, okisidasiana, PVD ary fitsaboana hafa eto an-tany.
Mestech dia manana ekipa injeniera misahana manokana ny famolavolana vokatra, manome orinasa kely sy salantsalany ary mpanjifa miaraka amina serivisy tokana amin'ny famolavolana vokatra, famokarana prototype vokatra, famokarana bobongolo vita amin'ny plastika sy vy, famokarana betsaka ary fametahana dokam-barotra.